Ywar Thar Lay (YTU): 9/1/13
မက္ဂ်ဖဟစ္အင္ပိုင္ယာ ထုိမွတဖန္ သရိုဝူလန္
Photo credit to : http://en.wikipedia.org/wiki/File:Surya_Majapahit.png
သူရဲကောင်းမြို့တော်ဆီကို သွားဖြစ်အောင် ဆွဲဆောင်တဲ့ အဓိက နေရာဟာ အခုသွားနေတဲ့ ရှေးဟောင်းမြို့တော် သရိုဝူလန်ပဲဖြစ်တယ်။ တချိန်က အရှေ့တောင်အာရှမှာ ကြီးမားကျယ်ပြန့်ခဲ့တဲ့ မက်ဂျဖဟစ်အင်ပိုင်ယာရဲ့ မြို့တော်ဟာ ဒီသရိုဝူလန်လို့ သမိုင်းသုတေသီတွေက အခိုင်အမာပြောနေကြတယ်။
အင်ပိုင်ယာရဲ့ ကျယ်ပြန့်မှုဟာ အင်ဒိုနီးရှားနိုင်ငံ ကျွန်းစုများသာမက မလေးရှား၊ ဘရူနိုင်း၊ စင်္ကာပူ၊ ထိုင်း၊ အရှေ့တီမောနဲ့ ဖိလစ်ပိုင်နိုင်ငံတို့အထိ နယ်မြေစိုးမိုးနိုင်ခဲ့တယ်။ မွန်ဂို စစ်ဘုရင် ကူဗလိုင်ခန်ကို စိန်ခေါ်တဲ့အထိ ထက်မြက်တဲ့ ဘုရင်အုပ်စိုးခဲ့တယ်လို့ သမိုင်းကတော့ဆိုတယ်။ မက်ဂျဆိုတဲ့စကားလုံးကတော့ အသီးလို့ အနက်ရပြီး ဖဟစ်ကတော့ခါးသက်ခြင်းလို့ ပြန်ပါတယ်။ အဲ့ဒီအင်ပိုင်ယာ စတည်တဲ့ သစ်တောထဲက အသီးနာမည်ကို ယူပြီး တည်ခဲ့တယ်လို့ယူဆထားကြတာပါ။ အရှေ့အပုဒ်မှာပါခဲ့တဲ့ စစ်သူကြီး ဂါဂျာမက်ဒါဟာလည်း ဒီအင်ပိုင်ယာကြီးထဲက စက်သွားလေးတခုပါပဲ။
ဘယ်လောက်ကြီးမားကျယ်ပြန့်ပါစေ တချိန်ချိန်မှာတော့ ပျောက်ဆုံးပျက်စီးသွားမြဲပဲမဟုတ်ပါလား။ တချိန်က တရုတ်နိုင်ငံ မင်မင်းဆက် ပညာရှင်တွေလာရောက်လည်ပတ် အတုယူခဲ့ရတဲ့၊ ကျနော်တို့ မြန်မာနိုင်ငံ တောင်ပိုင်းအထိတိုင်အောင် ကုန်ကူးသန်းရောင်းဝယ်ခဲ့တဲ့ အဲ့ဒီ မက်ဂျဖဟစ် အင်ပိုင်ယာကြီးဟာ ၁၅ရာစုနှစ်မှာပဲ အစိတ်စိတ်အကွဲကွဲဖြစ်ခဲ့ရပါတယ်။ ဒီအင်ပိုင်ယာကြီး ပြိုကွဲမှုကြောင့် အစ္စလာမ်ဘာသာ ကိုးကွယ်မှုတွေ စိမ့်ဝင်လာခဲ့ပြီး ဟိန္ဒူနဲ့ဗုဒ္ဓဘာသာကိုးကွယ်မှုတွေ တနေ့တခြားလျော့ပါးလာခဲ့တယ်လို့ သမိုင်းကတော့ ဆိုပါတယ်။ အင်ပိုင်ယာရဲ့ အကြွင်းအကျန်ဖြစ်တဲ့ ရင်ခွဲတံခါးလေးတွေဟာ ဟိန္ဒူဘာသာယဉ်ကျေးမှုပဲဖြစ်ပြီး ယခုအခါ ဘာလီကျွန်းမှာသာ မြင်တွေ့နိုင်ပါတော့တယ်။
ပျောက်ဆုံးသွားခဲ့တဲ့ မြို့တော်ကို ၁၉ရာစုနှစ်မှာ ဆာသောမတ်စ်စတန်းဖို့က တွေ့ရှိခဲ့တာပဲဖြစ်ပါတယ်။ ဆာသောမတ်စ်ဟာ စင်္ကာပူနိုင်ငံကို စတင်တည်ထောင်သူရယ်လို့လည်း နာမည်ကျော်ခဲ့တယ်။
ကျနော်ကတော့ အလုပ်ကိစ္စနဲ့တည်းဖြစ်တဲ့ ဒူမိုင်းမြို့ရှိ ဂရမ်းဇူယီဆိုတဲ့ ဟိုတယ်က မဂ္ဂဇင်းထဲမှာ ဒီမြို့တော်ကိုစတင်တွေ့ရှိခဲ့ပါတယ်။ အုတ်အနီရောင်ရဲရဲနဲ့ ဝိညာဉ်တံခါး ဖြစ်တဲ့ ဘဂျန်ရာတုဟာ ကျနော့ကို တနေ့မှာ မဖြစ်ဖြစ်အောင်သွားမယ်ဆိုတဲ့ ဆုံးဖြတ်ချက်ကို ချစေတဲ့အထိ စွဲဆောင်ခဲ့ပါတယ်။
ဒီတံခါးမှာ ရှိတဲ့ အနုပညာလက်ရာများဟာလည်း သူ့ခေတ်က သမိုင်းကို အတိုင်းသားဖွင့်ဆိုနေပါတော့တယ်။ တံခါးဟာ ဘုရင့် အိမ်တော်ရာ ဒါမှမဟုတ် နန်းတော်ကြီးတခုလုံးနဲ့ အနီးဆုံး အပိုင်းမှာရှိတယ်လို့ အားလုံးကယုံကြည်ထားကြပြီး သက်သေသာဓက တခုမှတော့ ယနေ့ထက်ထိတွေ့ရှိတယ်လို့ မကြားမိသေးပါဘူး။
တံခါးရဲ့ အနီးတဝိုက်မှာ ကန်ဒီ တိကုရှိပါတယ်။ ဒီစေတီကိုတော့ ကြွက်စေတီလို့လည်း ဒေသခံတွေက ခေါ်ကြတယ်။ ဒီစေတီကို ၁၉၁၂မှာ တွေ့ရှိပြီး တွေ့ရှိတဲ့နေရာဟာ ကြွက်သိုက်တခုမို့ ကြွက်စေတီလို့ အစွဲပြုခေါ်ဆိုကြတာပါ။ ဘုရင့် ရေချိုးကန်လို့ သတ်မှတ်ထားကြသလို၊ မြို့နေလူထုအတွက် ရေဝေတဲ့ နေရာလို့လည်း ယူဆကြပြန်ပါတယ်။ ဆောက်လုပ်ထားမှု အဆင့်နှစ်ဆင့်ရှိတယ်လို့ ဆောက်လုပ်ထားတဲ့ အုတ်အမျိုးအစားနှစ်မျိုးကနေ သက်သေခံလျက်ရှိတယ်။
ကန်ဒီတိကုကို ဖြတ်သွားတဲ့အခါ ပင်လယ်ပြင်လို့ သတ်မှတ်ထားတဲ့ ဆီဂါရန် ရေကန်ဘေးကနေ ကျော်သွားရပါတယ်။ မြို့နေလူထု သောက်သုံးရေအတွက် အသုံးပြုပုံရတယ်လို့ ယူဆရတဲ့ ရေကန်ဟာ တကယ့်ပင်လယ်ပြင်ကြီးလား လို့ထင်ရအောင် ကျယ်ပြောပါပေရဲ့။
လျှို့ဝှက်ဆန်းကြယ်မှုတွေနဲ့ ရှိနေဆဲဖြစ်တဲ့ ဘရာဟုစေတီကိုရောက်တဲ့အခါ ကျနော်နဲ့ ကိုရွှေဂိုက်တို့ စကားများပါတယ်။ ခရီးမသွားခင် လေ့လာထားတဲ့ ကျနော်က ကမ္ဗောဒီးယား မင်းသမီးရဲ့ အုတ်ဂူကိုသွားလိုတယ်လို့ ပြောထားခဲ့ပါတယ်။ ကိုရွှေဂိုက်က ကျနော့ကို စာမကျေဘူးယူဆပုံပါပဲ မင်းသမီးရဲ့ အရိုးအိုးဟာ ဒီဘရာဟုစေတီမှာလို့ ဘုရားပေါ်တက်ခွင့်မရဘူးဆိုတဲ့ ဆိုင်းဘုတ်ကိုပြပြီးပြောတဲ့အခါ ကျနော် အတော်လေး စိတ်တိုပါတယ်။ လိုက်မပို့နိုင်ဘူး ဒါမှမဟုတ် ငါမသိဘူးလို့ ပြောလိုက်ရင် ရပါလျက် ကျနော့ကို လိမ်ညာတဲ့အပြင် သမိုင်းကိုပါ ပြင်ပြီးပြောတဲ့ ဧည့်လမ်းညွှန်မို့ စိတ်ထဲမှာ လေးစားမှုကို မရှိတော့လောက်အောင်ကို စိတ်ပျက်မိပါတယ်။ တကယ်တမ်း ဒီဘရာဟု စေတီကို ဗုဒ္ဓဘာသာတွေ တည်ခဲ့တယ်လို့ ဖွဲ့စည်းတည်ဆောက်ပုံအရ သတ်မှတ်ထားတာဖြစ်ပြီး ကွယ်လွန်ပြီးတဲ့ ဘုရင်တွေရဲ့ အရိုးပြာတွေ ထားခဲ့တဲ့ နေရာလို့ မှန်းဆထားခဲ့ကြပါတယ်။
ဘရာဟုကနေ နောက်ဆုံး ဝရင်ဂင်လဝမ် စေတီကို ကူးပါတယ်။ စေတီလို့သာ ခေါ်ရတယ် သူရဲ့ ဖွဲ့စည်းပုံက ဘဂျန်ရာတု တံခါးနဲ့ တပုံစံတည်းပဲ။ သူ့နာမည်ရဲ့ အနက်ကတော့ ညောင်ပင်ရိပ်တံခါးလို့ ခေါ်ပြီး စစ်သူကြီး ဂါဂျာမက်ဒါရဲ့ အိမ်တံခါးဝင်ပေါက်လို့ အားလုံးက လက်ခံထားပါတယ်။ တံခါးရဲ့ ဘေးမှာ မူလက အုတ်မြို့ရိုး ရှိပုံရသော်လည်း အခုတော့ တံခါးတခုတည်းသာ ထီးတည်းကျန်လို့နေတယ်။ တံခါး နောက်ဖက်က ကြံခင်းတွေကို ကြည့်ရင်း ရှေးတုန်းက စည်ကားခဲ့တဲ့ မြို့ကြီးတခုကို စိတ်ထဲက လွမ်းဆွတ်လို့လာပါတော့တယ်။
သရိုဝူလန်ကနေ သူရဲကောင်းတို့ရဲ့ မြို့တော်ဆီကို ပြန်ကြတယ်။ နှစ်နာရီကျော်လောက်မောင်းရပြီး မိုးကတဖွဲဖွဲရွာနေတော့တယ်။ မြို့ကို ပြန်မရောက်မချင်း မြို့ဟောင်းရဲ့ အရိပ်တွေဟာ ကျနော့စိတ်ထဲမှာ ထပ်တလဲလဲ ဝဲလည်ပြီး ဝင်ရောက်နေကြတယ်။
မြို့ကိုရောက်တော့ ဟိုတယ်ကိုဝင် အထုတ်တွေချပြီးတဲ့အခါ ညစာစားဖို့ အနားက ရှော့ပင်းမင်းမောကို အသော့နှင်တယ်။ ဗိုက်ကအတော်ဆာနေပြီ။ မောမောနဲ့ ငယ်ရည်စားကိုတွေ့ရသလို အတော်လေး ဝမ်းသာသွားမိတယ်။
ဟုတ်တယ်လေ ရန်ကုန်မှာပဲထိုင်ဖြစ်ခဲ့တဲ့ Black Canyon Coffe ဆိုင်ကို ပြန်တွေ့ရတာကိုး။ သူငယ်ချင်း နှစ်ယောက် ဆာဆာနဲ့ အတော်လေးကို မှာစားဖြစ်ခဲ့တယ်။
Posted by ywartharlay-ytu at 11:03 PM0comments Links to this post
ပံုျပင္ထဲကေရတံခြန္၊ ဆင္ဂိုဆာရီ၊ ဂ်ာဂိုနဲ႕ ကီထဲ
မက်ဒါကာရိပူရ ရေတံခွန်ကနေပြန်လာတဲ့အခါ တကယ့် မူလ အစီအစဉ်က အရှေ့ဘက်ဂျာဗားကျွန်းမှာ ဒုတိယအကြီးဆုံးမြို့ဖြစ်တဲ့ မလန်း အနားတဝိုက်ကို လည်ဖို့ပါ။ ပြီးရင်တောင်ပေါ်ပြန်တက် နေဝင်ရှုခင်းကြည့်မယ်ပေါ့။ တကယ်တမ်း သွားကြည့်တဲ့အခါ..
ပထမဆုံး ပုံပြင်ထဲက ရေတံခွန်တခုကို ရောက်ပါတယ်။ သူ့နာမည်က ကိုဘန်ရွန်ဒို။ အမြင့် ၈၄မီတာရှိပြီး တရှိန်ထိုးစီးဆင်းနေတဲ့ ရေတံခွန်ကို ဟိုးအဝေးကနေမြင်နိုင်တယ်။ သူရဲ့ပုံပြင်လေးကတော့ ကြေကွဲစရာပါ။ ညားခါစ ဇနီးမောင်နှံဖြစ်တဲ့ အန်ဂျပ်မိုရိုနဲ့ ဒေဝီအန်ဂျာဝတီတို့ဟာ အန်ဂျပ်မိုရိုရဲ့ဒေသကို ပျားရည်ဆမ်းခရီးထွက်လာသတဲ့။ ဒီခရီးကိုဒေဝီရဲ့ မိဘတွေက အတန်တန်တားပေမယ့် ဒေဝီ့ကို အလိုလိုက်ပြီး သူတို့ထွက်လာကြတယ်။ လာတဲ့လမ်းခရီးမှာပဲ ဂျိုကိုလီလိုနိုဆိုတဲ့ သူတယောက်နဲ့ဆုံတယ်။ လူကြမ်းမင်းသား ဂျိုကိုလီလိုနိုက ချောမောလှပဲတဲ့ ဒေဝီ့ကို မရမနေလိုချင်လာတဲ့အခါ..အန်ဂျပ်နဲ့ဂျိုကိုတို့ အပြင်းအထန်တိုက်ပွဲဖြစ်ကြပါလေရော။ သူတို့တိုက်ပွဲဖြစ်နေတဲ့အချိန်မှာ ဒေဝီ့ကို ဟောဒီ ကိုဘန်ရွန်ဒိုရေတံခွန်အောက်နေရာမှာ အစောင့်အရှောက်နဲ့ထားခဲ့တယ်။ အင်အားချင်းထပ်တူညီနေတဲ့နောက် အပြင်းအထန်တိုက်ခိုက်ကြလို့ သူတို့နှစ်ယောက်စလုံး ဒဏ်ရာကိုယ်စီနဲ့ အသက်ဆုံးရှုံးကြရှာတယ်။ ကိုဘန်ဆိုတဲ့နာမည်က ရေတံခွန်လို့ အနက်ရပြီး ရွန်ဒိုဆိုတာက မုဆိုးမလို့ သူတို့ဘာသာမှာဆိုပါတယ်။ မုဆိုးမဖြစ်သွားတဲ့ ဒေဝီငိုကြွေးလွန်းလို့ အခုလို ရေတံခွန်တခုတောင်ဖြစ်လာတယ်လို့ ဒေသခံတွေက ယုံကြည်နေကြဆဲ။
တနေ့တာ ခရီးပြီးလုပြန်တော့ တောင်ပေါ်ကို ပြန်တက်ရင် အချိန်အတော်လင့်နေမယ်လို့ ကိုရွှေဂိုက်က ပြောလာတယ်။ မလန်းနဲ့ သိပ်မကွာတဲ့ တောင်ပေါ်မြို့လေးဖြစ်တဲ့ ဘတုမှာ နေပါလားလို့ အကြံပြုတယ်။ အချိန်ဟာ အတော်လင့်နေတာမို့ မနက်လည်း ခရီးဆက်ရဦးမှာဆိုတော့ သူငယ်ချင်းနဲ့တိုင်ပင်ပြီး ဘတုမှာ တညအိပ်ဖို့ လက်ခံလိုက်တယ်။
ဘတုမှာကျွေးတဲ့ ညစာဟာ ဂျမ်ဘူလူဝပ်မှာပါ။ ဂိုက်က ညစာပြီးရင် တောင်ပေါ်က ရိုးရာဆိုင်လေးမှာ အေးဆေးထိုင်ကြဦးစို့လို့ဆိုတဲ့အခါ ကျနော်ကလည်း မငြင်းချင်ခဲ့ဘူး။ အေးမြလတ်ဆတ်တဲ့လေကိုရှူရင်း တောင်အောက်ကမီးတွေနဲ့ထိန်ထိန်ငြီးနေတဲ့မြို့ကို ဝါးလုံးတန်းလေးတွေနဲ့ဆောက်ထားတဲ့ဆိုင်မှာ အပူအပင်မဲ့ ငေးရတဲ့အရသာဟာ ဘာနဲ့မှ မလဲနိုင်ဘူး မဟုတ်လား။
ပထမဆုံး ဆင်ဂိုဆာရီ စေတီကိုသွားပါတယ်။ ရှေးတုန်းက နေပြည်တော်ဟောင်းနေရာဖြစ်ခဲ့ပြီး ဆင်ဂါဆာရီဘုရင်ရဲ့ နန်းဦးစေတီလို့ ယူဆရတဲ့စေတီတဆူပါ။
ဆင်ဂိုဆာရီကနေ ဂျာဂိုစေတီဆီ တော်တော်ဝေးကိုမောင်းရတာ သတိထားမိတယ်။ ဂျာဂိုစေတီဟာ လူနေအိမ်ခြေထဲမှာပဲ ထီးတည်းရှိနေတယ်။ ပြုပြင်ထိန်းသိမ်းမှု နည်းပါးပေမယ့် အပျက်အစီးတွေကြားကနေ လှနေတဲ့ စေတီဟာ အဲ့ဒီခေတ်ရဲ့ယဉ်ကျေးမှုကို အတိုင်းသားပြနေလျက်။ မူလပထမနာမည်က ဂျဂျာဟုဖြစ်ပြီး ကြီးမြင့်ခြင်းလို့ အနက်ရပါတယ်။ စေတီတည်တဲ့ခေတ် အေဒီ၁၂ရာစုမှာပါ။ ဘုရင် ဝိစနုကတည်ခဲ့ပြီး သူ့ခေတ်မှာ ဟိန္ဒူနဲ့ ဗုဒ္ဓဘာသာ ကိုးကွယ်မှုရောထွေးနေပြန်တယ်။ ဘုရားပတ်ပတ်လည်မှာ အရုပ်တွေ နေရာလပ်မကျန်အောင် တည်ရှိပြီး အရုပ်တွေက ဟိန္ဒူဇာတ်တော် ကရှစ်ရှနာနဲ့ ကလာရာဝဏတိုရဲ့စစ်ပွဲကို ရေးထိုးထားတာပါ။ ပိရမစ်ပုံစံအဆောက်အအုံမှာ လွတ်မြောက်ခြင်းဆိုတဲ့ အနှစ်သာရ ပေါ်လွင်အောင် ဆောက်လုပ်ထားတယ်လို့ သမိုင်းကတော့ ဆိုပါတယ်။ ဒီစေတီကို ဓါတ်ပုံရိုက်လို့ မဝနိုင်အောင်ဖြစ်ရပါတယ်။ အရပ်လေးမျက်နှာကနေ အထပ်တထပ်စီတိုင်းကို အသေးစိတ်ရိုက်နေမိတယ်။
ဂျဂိုစေတီကနေ ကီထဲကိုသွားတဲ့အခါ ကီထဲဟာ စိတ်ထဲမှာ သေးငယ်သွားသလိုပါပဲ။ ဂျာဂိုလို ကြီးမြင့်ခြင်းတွေ မရှိပဲ သမာရိုးကျပုံမှန်လေးမို့ ကီထဲကို ခပ်မြန်မြန်ပဲလေ့လာမိတယ်။ သူ့မှာ ရှိနေတဲ့ ဘီလူးရုပ်ကြီးတွေဟာ အသက်ဝင်လွန်းတာမို့ တွဲပြီးတော့ ရိုက်ခဲ့မိပါရဲ့။
နောက်တခရီးကတော့ သရိုဝူလန်ဆိုတဲ့ မြို့တော်ဟောင်းဆီကို ဆက်လက်ချီတက်ကြတယ်။ ဒီခရီးကိုအသွားနေ့လည်စာကိုတော့ သူတို့ ဂျာဗားဒေသစာနဲ့ ဧည့်ခံပါတယ်။
ခရီးကအတော်ဝေးပြီး တောင်တွေကို ဖြတ်ရတဲ့အခါ အေးမြတဲ့ရာသီဥတုအပြင် မြူတွေက ရှစ်ခွင်လုံး မှုန်မှိုင်းအုံ့ဆိုင်းလို့ နေပါတယ်။ မြူတွေထဲကနေ ကျနော်သွားချင်တဲ့ မြို့ဟောင်းဟာ မထင်မှတ်ပဲ ဘွားကနဲ ပေါ်လာမလားဆိုတဲ့ စိတ်နဲ့ ဒီခရီးက ကျနော့စိတ်ကို တချိန်လုံး လှုပ်နိုးနေခဲ့ပါတော့တယ်…
Posted by ywartharlay-ytu at 3:12 PM0comments Links to this post
က်ေနာ္သိသည္မွာ M သာျဖစ္ခဲ့သည္။ တခါတရံ လူ႕ဘ၀ၾကီးသည္ အ့ံၾသထူးဆန္းဖို႕ေကာင္းလြန္းလွသည္။ အမွတ္မထင္အရာတခုမွသည္ က်ေနာ္ M ကိုစေတြ႕ခဲ့ျခင္းပင္။ တကယ္တမ္း Mကလည္း ထိုနည္းႏွင္ႏွင္ ျဖစ္ေနမည္သာ…
Mသည္ က်ေနာ့အတြက္ မီးပ်က္ေသာညမွာ ခဏေတြ႕လိုက္ရေသာ လေရာင္တခုပမာ။ အလင္းေပးသလို ေအးျမျခင္းဆိုတဲ့ အရသာကို မထိေတြ႕ပါပဲ ရင္ထဲကို သက္၀င္ေစတယ္။ စကားနည္းတဲ့ က်ေနာ္က M နဲ႕ေတြ႕ရင္ ခရားေလးတခုလို၊ ေရတေကာင္းေလး တခုလို ျဖစ္မွန္းမသိျဖစ္ေစတယ္။ ခံစားရသမွ်ကုိ ဘယ့္သူကိုမွ ခ်မျပဖူးတဲ့ က်ေနာ္၊ M ဟာ က်ေနာ့ရဲ့ မွန္တခ်ပ္ျဖစ္ေစခဲ့တယ္။ က်ေနာ့ရဲ့ အရွိအတိုင္းကို သိၾကားခြင့္ရွိခဲ့ဖူးတာ ဘ၀တခုလံုးမွာ M တေယာက္တည္း..
စိတ္ခ်လံုျခံဳမွဳကို ရတဲ့အခါ အရာအားလံုးကို မွ်ေ၀ဖို႕ ၀န္မေလးေတာ့ဘူးဆိုတဲ့ လူမွဳစိတ္ပညာ အေျခခံကို M နဲ႕ေတြ႕တဲ့အခိုက္မွာ ရလိုက္သလိုလို။ က်ေနာ့ရဲ့ အားနည္းခ်က္ေတြကို ေထာက္ျပေ၀ဖန္ေပးဖို႕၊ စိတ္ဓါတ္က် အားငယ္လြယ္တဲ့ ေနရာမွာ ၀ါးနဲ႕ကူျပီးမထိုးလိုက္ပဲ အားနဲ႕ကူျပီးဆြဲေပးတတ္တဲ့ သူငယ္ခ်င္းတေယာက္ အျဖစ္ကို တျဖည္းျဖည္းျဖစ္တည္လာခဲ့တယ္။ M ဟာ က်ေနာ့ရဲ့ ခြန္အားတခုပါ..
ျပီးျပည့္စံုတဲ့ လူ႕ဘ၀ဆိုတာ ဘယ္သူ ဘယ္၀ါဆီမွာမွ မရွိဘူး။ ခ်မ္းသာသူရဲ့ ဆင္းရဲျခင္းေတြရွိသလို၊ မျပည့္စံုသူမွာလည္း ရလိုမွဳေတြနဲ႕။ M ရဲ့ တစိတ္တပိုင္းကို နာၾကားရတဲ့အခါ၊ ကိုယ္ရဲ့ ေ၀ဒနာကို ေလ်ာ့ပါးေစတယ္။ ဆတူဆိုတာမ်ိဳးမဟုတ္ေပမယ့္ ေခါင္းမိုးမလံုတာ ကိုယ္တေယာက္တည္းမဟုတ္ဘူးဆိုတဲ့ အတၱက လွံဳေဆာ္ အားေပးတာမ်ိဳးလုိ႕ ၀န္ခံပါရေစ။
က်ေနာ္တို႕ေတြဟာ အရင္းႏွီးစိမ္းသူစိမ္းေတြ ဆိုတဲ့ အသံုးအႏွဳန္းက အသင့္ေလ်ာ္ဆံုးျဖစ္မယ္ M။ ရင္ထဲက ေဆာင္းရာသီေတြကို ညွိၾကတဲ့အခါ တေယာက္ရဲ့ ေဆာင္းရာသီကို တေယာက္ မီးေလးေတြဖိုလို႕ အတူတကြေႏြးေအာင္ လွံဳဖူးခဲ့ၾကတယ္။ မိတ္ေဆြဆုိတဲ့ အနက္ဟာ ျပန္ဖို႕လြယ္သလို၊ ရန္သူဆိုတဲ့ စကားလံုးဟာလည္း သံုးရလြယ္တယ္။ ေနာက္ကြယ္က ဓါးေတြအေၾကာင္းကို ေျပာရင္း လက္နက္မဲ့ ျဖစ္ျဖစ္ေနတဲ့ ႏွစ္ေယာက္အျဖစ္ကို အတူတကြရီခဲ့ၾကတာပဲ။
အရိပ္ဆုိတဲ့အရာဟာ အေတာ္ေလးတာသြားတယ္။ ပတ္၀န္းက်င္ မိသားစုရဲ့ အရိပ္ဟာ ေအးျမတာရွိသလို၊ တခါတေလမွာ ေျခာက္ေသြ႕အက္ကြဲေနတာမ်ိဳး။ ေမ့ေပ်ာက္လြယ္ေသာ အတိတ္ဆိုတာ ကြန္ျပဴတာမွာ ပါတဲ့ Delete key လိုမ်ိဳး ႏွိပ္ျပီး ဖ်က္လို႕ရခ်င္မိတာပါပဲ။ Mေရ ဘ၀ဆိုတာ ကိုယ္တိုင္ျခယ္ေနတဲ့ပန္းခ်ီကားမွန္ေပမယ့္ ေဆးေရာင္ကေတာ့ ကိုယ့္စိတ္ၾကိဳက္မဟုတ္ျပန္ဘူး။ တခ်ိဳ႕ထိစပ္မွဳေတြဟာ ေရြးခ်ယ္လို႕ မရပဲ ခ်မွတ္ထားတဲ့အတုိင္း ေနရတဲ့အခါ လူတိုင္းစိတ္က်ဥ္းက်ပ္ၾကတာပါပဲ။ ထြက္ေပါက္ဆုိတဲ့ အရာကို မေရာက္ေရာက္ေအာင္ရွာဖို႕ေတာ့ ခက္သားလား။
M ရဲ့ စိမ့္၀င္လာမွဳဟာ က်ေနာ့ဖက္က သူ႕အေပၚ သက္ေရာက္မွဳနဲ႕ ထပ္တူရွိမယ္လို႕ က်ေနာ္ယံုၾကည္တယ္။ ျပီးေတာ့ က်ေနာ္သူ႕ကို စိုးရိမ္လာတယ္။ သူရင္ဆိုင္ေနရတဲ့ အပိုင္းဟာ က်ေနာ္ ၾကံဳေနရတဲ့ အခက္အခဲေတြထက္ ပိုေလးနက္တယ္။ က်ေနာ့အတြက္ ေက်ာခိုင္းလို႕ရေပမယ့္ သူ႕အတြက္ ေဘးတေစာင္းေတာင္ ရပ္ေနလို႕မျဖစ္တဲ့ အေျခအေနမ်ိဳးေတြ။ လုပ္ေနလက္စအရာေတြကို ခဏထားျပီး သူခရီးတခု သြားမယ္လို႕ ေျပာတဲ့အခါ က်ေနာ္ကပါ အင္တိုက္အားတိုက္ အားေပးမိတယ္။ စိတ္သစ္လူသစ္နဲ႕ ဘ၀ကို ျပန္လည္ပ်ိဳးေထာင္ဖို႕ တခါတေလ ေနရာအသစ္ဟာ သိပ္အေရးပါတယ္။
ခရီးထြက္သြားျပီးေနာက္ပိုင္းမွာ သတင္းတခါႏွစ္ခါ ၾကားတယ္။ ေပ်ာ္ရႊင္မွဳေတြနဲ႕ ေနေရာင္ျခည္ေတြ ျပန္ရလာတဲ့ ရြက္သစ္တခုလို သူ႕ကိုျမင္ရတယ္။ စိမ္းစိုေနတာပဲ ျမင္ခ်င္ပါတယ္။ လန္းဆန္းေနတာပဲ ျမင္ခ်င္ပါတယ္။ မိုးရြာတိုင္း သတိရမိတယ္ M။ ေျမနိမ့္ခဲ့ဖူးတဲ့က်ေနာ့ဆီမွာ ေရ၀ပ္ခဲ့တဲ့အတြက္ မုိးရြာတာကို အျပစ္မတင္ပဲ ေျမဖို႕ထားဖုိ႕ဆိုတဲ့ အေတြးကို ေပးခဲ့ဖူးတာမဟုတ္လား။
M ခရီးထြက္သြားလိုက္တာ အခုထိ ဘာသံမွ မၾကားရေတာ့ဘူးေနာ္။ M သြားတဲ့ခရီးက က်ေနာ္ မသြားေစခ်င္တဲ့ ခရီးမ်ားလား နည္းနည္းေတာ့စိုးထိတ္မိပါတယ္။ အကယ္၍ စိမ္းလန္းေပ်ာ္ရႊင္ေနမယ္ဆိုလည္း ေပ်ာ္ရႊင္ဖြယ္ ခရီးေလးျဖစ္ပါေစလို႕ က်ေနာ္ဆုေတာင္းတယ္။ က်ေနာ့ဆီမွာေတာ့ မုိးေတြရြာေနလို႕ မၾကာခင္ ေဆာင္းဦးကို၀င္ေတာ့မယ္။
က်ေနာ့ကိုဒီေနရာမွာ ျမင္ရေတာ့ M ဟာ အေပ်ာ္ဆံုးျဖစ္မယ္လို႕ က်ေနာ္ယံုၾကည္ထားဆဲ။ ဒီစာကိုဖတ္မိရင္၊ ဒါမွမဟုတ္ က်ေနာ့ကို သတိရလို႕ သမင္လည္ျပန္ၾကည့္ခဲ့မိရင္ M တေယာက္ အစစ အဆင္ေျပေနတယ္လို႕ မွတ္ထင္ထားတဲ့သူ တေယာက္ ရွိေနေၾကာင္းသိေစလိုပါတယ္။
က်ေနာ္တုိ႕ လမ္းၾကံဳၾကဦးမွာပါ ဟုတ္တယ္မဟုတ္လား M….
Posted by ywartharlay-ytu at 12:25 PM0comments Links to this post
ေလယာဥ္ေပၚကတည္းက ေသေသခ်ာခ်ာၾကည့္ေနမိသည္။ သူသည္ က်ေနာ့ကို စိမ္းလို႕သာေနသည္။ စိမ္းစိမ္းျမျမေနေသာ ေျမျပင္ရွိရွာဆီကို က်ေနာ္ ေရာက္ေတာ့မည္။ ေလယာဥ္ဘီးျငိမ့္ခနဲ အထိ ရင္ထဲမွာ စိမ္းသက္ေနေသာ အရသာကလည္း ျငိခနဲ…
ေလဆိပ္အေငြ႕အသက္သည္လည္း သူစိမ္းျပင္ျပင္။ လွိဳက္လဲွၾကိဳဆိုဟန္မရွိေသာ ၀တ္ေက်တမ္းေက်ႏိုင္မွဳ၏ ေျခာက္ေသြ႕ျခင္းကို ရင္ထဲက ဖာသာ ခံစားလ်က္။ လာၾကိဳတဲ့သူငယ္ခ်င္းနဲ႕အတူ ရွစ္မိုင္က Lucky7မွာ ပထမဆံုးအျဖစ္ မုန္႕ဟင္းခါးနဲ႕ လက္ဖက္ရည္ကို ေသာက္သည္။ မိုးရြာထားေသာေၾကာင့္ စိုစြတ္ေနေသာ လမး္တေလွ်ာက္တြင္ သစ္ပင္တခ်ိဳ႕က စိမ္းစိုေနဆဲ။
ဟိုတယ္၀န္ထမ္း၏ မ်က္လံုးစိမ္းစိမ္းကို စျမင္ရလိုက္ေတာ့ သူတို႕၀န္ေဆာင္မွဳ မေကာင္းဘူးဆိုတဲ့ အခ်က္ကို ၾကားထားႏွင့္တာမုိ႕ သိပ္မဆန္းေတာ့။ အလုပ္လက္မခံခင္ကနဲ႕ လက္ခံအျပီး ေျပာင္းလဲသြားတဲ့ ေလသံကတင္ အေတာ္ေလးကြာဟေနခဲ့တယ္။ ႏိုင္ငံတကာနဲ႕လုပ္ကိုင္မယ့္ ၀န္ေဆာင္မွဳမ်ိဳးဟာ ဒီလို ၀န္ေဆာင္မွဳမ်ိဳး မဟုတ္ဘူးဆိုတာ အဲ့ဒီအစိမ္းေရာင္၀တ္အမ်ိဳးသမီးဟာ ဘယ္နည္းနဲ႕မွ သေဘာေပါက္မယ္မဟုတ္ေပဘူး။ အျပံဳးတခ်က္ေတာင္ မရွိတဲ့ ဒီအစိမ္းေရာင္၀တ္ရံုကို ျခံဳထားသေရြ႕ေတာ့ ဒီလိုပဲျဖစ္ေနဦးမယ္။
အရင္တုန္းကလိုမဟုတ္ပဲ အစီးေရမ်ားလာတဲ့ ကားလမ္းမေပၚမွာ ကားေတြၾကပ္တယ္လို႕ ေအာ္ေနၾကတာမဟုတ္လား။ ဂ်ကာတာ ကားၾကပ္တာမၾကံဳဖူးလို႕ ရန္ကုန္ကို ကားၾကပ္တယ္လို႕ ေအာ္ေနၾကတာပါ။ လွည္းတန္းကုန္းေက်ာ္ကို ပထမဆံုးျဖတ္ရတဲ့အခါ အရင္တုန္းက အတိတ္ဆိုတဲ့ အရာကို ျပန္သတိရတယ္။ အတိတ္ကလည္း က်ေနာ့ကို ခပ္စိမ္းစိမ္းပဲျပန္ၾကည့္ေနတာေတြ႕တယ္။
ေရႊဂံုတိုင္မီးပြိဳင့္သည္လည္း အရင္လိုမဟုတ္ျပန္ေတာ့။ ျမိဳ႕ထဲအဆင္း တျခမ္းသာဖြင့္၍ ကမာၻေအးဖက္ အတက္ကို ပိတ္ထားသည္မို႕ ကားသမားမ်ားဆီက ျငီးျငဴသံတုိ႕ ျခဴသံပါလွျပီ။ အေ၀းေျပးဂိတ္ကိုဆင္းဖို႕ ႏွစ္နာရီေတာင္ ၾကိဳဆင္းရမယ္ဆိုေတာ့ စကားလံုးစိမ္းစိမ္းတခု ၾကားလိုက္ရသလို ခံစားမိခဲ့သည္။
ေျမနီကုန္းက တုတ္ထိုးဆိုင္ကဘၾကီးသည္လည္း က်ေနာ့ကို မမွတ္မိပဲရွိသည္။ ေျခာက္ႏွစ္ဆိုေသာ အခ်ိန္ကာလသည္ လူတေယာက္ကို ေကာင္းေကာင္းေမ့ေဖ်ာက္ပစ္ႏိုင္သည္။ အစိမ္းေရာင္ ဒဂုန္စင္တာ အသစ္ၾကီးကိုေက်ာခိုင္းရင္း လမ္းကိုမရဲတရဲျဖတ္ကူးေနမိျပန္သည္။
ငွားစီးမိေသာ တကၠစီမွန္သမွ်သည္ ဟိုအရင္လို မွန္တံခါးအဖြင့္အပိတ္လွည့္စရာ လက္ကိုင္မရွိေသာ ကားမ်ား မဟုတ္ၾကေတာ့။ ကြန္ျပဴတာစနစ္ျဖင့္ ထိန္းေသာ ကားမ်ားျဖစ္သည္ဟု တကၠစီဆရာက အားရပါးရ ရွင္းျပသည္။ ထိုမွတ၀ အကိုက ကြန္ျပဴတာနဲ႕ အလုပ္လုပ္တာဆိုေတာ့ က်ေနာ့ကားကို ကြန္ျပဴတာနဲ႕ ခ်ိတ္ျပီး ဘာေတြလိုအပ္ေသးသလဲ ၾကည့္ေပးပါဟု ဆုိေသာအခါ က်ေနာ္က သူ႕ကို စိမ္းစိမ္းကားကားၾကီးကို စိုက္ၾကည့္ပစ္လိုက္သည္။ ေက်ာပိုးအိတ္ထဲမွာ ကြန္ျပဴတာမပါေသးလို႕ဆုိျပီး ဆင္ေျခေကာင္းေကာင္းကန္ႏိုင္မိတဲ့ ကိုယ့္ကိုကိုယ္ေတာင္ ေက်းဇူးတင္မိ။
နယ္ကအိမ္ျပန္ဖုိ႕ Scania တံဆိပ္ကားၾကီးေတြ စတင္ေျပးဆြဲေနျပီတဲ့ေလ။ အရင္လို တညလံုးေညာင္းေနေအာင္ စီးရတာမ်ိဳးမဟုတ္ေလေတာ့။ စိမ့္ေနေအာင္ေအးတဲ့ ကားၾကီးေပၚမွာ အစိမ္းေရာင္ ေစာင္တထည္က ခန္႕တည္တည္။
မိုးတြင္းမုိ႕ထင္ရဲ့ ေဘးပတ္၀န္းက်င္လမ္းတေလွ်ာက္က စိမ္းေနေသာ စပါးပင္တန္းမ်ား၊ စိုက္ခင္းမ်ားအားလံုးသည္ တရိပ္ရိပ္ေဘးမွာ ကပ္လ်က္ပါေနခဲ့သည္။ အိမ္ကို၀င္,၀င္ခ်င္း ေရႊစက္ေတာ္ဘုရားပြဲမွာ ၀ယ္ထားတဲ့ ခ်င္းေလးက သူတစိမ္းမို႕ တအားထိုးေဟာင္ေလ၏။ ျခံစည္းရိုးအစား တန္းစီခ်ထားေသာ ဗိုလ္ကေတာ္မ်က္ခံုးပင္မ်ားသည္လည္း စိမ္းေမွာင္ေနခဲ့ျပီ။ အပင္ေတြျဖတ္တဲ့သူကို ေခၚျပီး ေသခ်ာျဖတ္ရင္း ျခင္ကိုက္၊ ပဆုပ္ပနီကိုက္တာကို ခံရျပန္ေသးတာ။
တီဗီအစီအစဥ္မ်ားႏွင့္လည္း သူစိမ္းျပင္ျပင္သာ။ ယုတ္စြအဆံုး တီဗီဖြင့္ရန္ခလုတ္မ်ားကအစ က်ေနာ္မသိပါ။ ဆယ္စုႏွစ္တခုမက က်ေနာ္သည္ အိမ္ႏွင့္ေ၀းေနခဲ့ျပီ။ Skynet,5movie ႏွင့္အတူ လာေနေသာ အစီအစဥ္မ်ားကလည္း အကြ်မ္းတ၀င္မရွိလွ။
က်ေနာ္ၾကီးျပင္းခဲ့ေသာ စက္ရံုေျမသည္လည္း ထိုနည္းႏွင္ႏွင္။ လုပ္ပံုလုပ္ထံုးမ်ားကို ၾကားနာရသည္မွာပင္ မသက္ဆိုင္သကဲ့သို႕။ ျဖစ္သင့္သည္ထက္ ျဖစ္ခ်င္သလို ျဖစ္ေနသမွ်ကို ထိုင္ၾကည့္ေနရေသာ သူတို႕ကို အားမရ. အားမရသည္သာရွိ၍ ကိုယ္တုိင္ကလည္း ဘာမွ လုပ္ေပးႏိုင္သည္မဟုတ္ပါလား။
က်ေနာ္ စာသင္ေပးခဲ့ေသာ ကေလးက ရန္ကုန္ႏွင့္မေကြးတြင္ အိမ္၀ိုင္းမ်ားျဖင့္ အဆင္ေျပရံုသာမက၊ သူ႕အေမစီးဖို႕ ကားေကာင္းတစီးပင္ ၀ယ္ေပးထားျပန္သည္ဆုိေတာ့ ၀မ္းသာအားရရွိရသလို တဖက္မွာလည္း စိတ္မေကာင္းျဖစ္ရျပန္သည္။ စြန္႕ခြာခဲ့သမွ်ႏွင့္ ထပ္တူမက်ေသာ အက်ိဳးေလလား၊ သံသရာအတြက္ ကင္းကင္းရွင္းရွင္းမို႕ ၀မ္းေျမာက္ၾကည္ႏူးရမလား မေ၀ခဲြႏိုင္.
အခုတခါတည္း ျပန္လာျပီလား၊ ေကာင္းတာေပါ့ ဆိုတဲ့ မွတ္ခ်က္မ်ားသာ ေပး၍ က်ေနာ့ကို ေျဖရွင္းခ်က္မ်ား မေပးသည္လည္း ရွိသည္။ ဟိုမွာ ဘယ္ေလာက္ရတုန္း၊ ဒီမွာေတာ့ ဒီေလာက္ရကုန္ျပီဆုိျပီး တြက္ျပ ခ်က္ျပသူေတြနဲ႕လည္း ၾကံဳသည္။ အသက္အရြယ္ႏွင့္ဆိုင္ေသာ အမွဳကိစၥတခုကို ထပ္တလဲလဲ နားညည္းေအာင္ သူ႕ကိစၥလုပ္ျပီး ႏွဳိးေဆာ္သူလည္း ပါေသးသည္။
ရင္ထဲကေတာ့ လွိဳက္လွဳိက္လွဲလွဲကိုရင္းႏွီးသက္၀င္သည္။ သို႕ေသာ္ ေနရာအေတာ္မ်ားမ်ားသည္ က်ေနာ့အတြက္ အံ၀င္ခြင္မက်ေသး။ အံ၀င္သြားေသာ သူငယ္ခ်င္းမ်ားႏွင့္ ထိုအေၾကာင္းရာကို ထပ္တလဲလဲ ေဆြးေႏြးရေပဦးမည္။ တကယ့္ကို ေဆြးေႏြးခ်င္ပါသည္။
ေလယာဥ္ပ်ံ အတက္မွာ မွန္ျပတင္းကေန ျပန္ၾကည့္မိသည္။ ရန္ကုန္ျမိဳ႕ကလြဲ၍ က်န္ေနရာအားလံုးသည္ စိမ္းညွိဳ႕ေနၾကသည္။
အခုလက္ရွိ က်ေနာ့ေျမသည္ က်ေနာ့အတြက္ေတာ့ စိမ္းေနဦးမည္သာ ျဖစ္သည္…
(စိမ္းေနဦးမည့္ က်ေနာ့ေျမ ေခါင္းစဥ္ကို တကၠသိုလ္ဘုန္းႏုိင္စာအုပ္မွ ႏွစ္လို၍ ယူသံုးထားမိပါသည္)
Posted by ywartharlay-ytu at 4:44 PM0comments Links to this post
မှော်ဆိုတာမျိုးကအံ့ဖွယ်သရဲ…ထူးကဲပါဘိခြင်း။ မှော်အောင်တယ်ဆိုတော့ မှော်ဆရာတွေများလား.မဟုတ်ဘူးတဲ့၊ မှော်အောင်တယ်ဆိုတာ ကျောက်အောင်သလိုမျိုး ပိုက်ဆံတွေ အများကြီးရတာဆိုပါလား။ အဲ့ဒီမှော်ဆိုတဲ့ စကားလုံးက ပဥ္စလက်ဆန်ဆန် ကျနော့ဆီကို ရောက်လာခဲ့တယ်…
ကျနော်တို့အရပ်မှာ မှော်ကို မသိရင် ရန်ကုန်မရောက်ဖူးတာထက် ခေတ်နောက်ကျပါတယ်။ လူငယ်တိုင်းရဲ့ အိပ်မက်ဟာ ဟိုအရင်တုန်းက ဖားကန့် ကျောက်စိမ်းတွင်းတွေဆီကနေ၊ နမ့်တောရွှေမျှောတွေဆီကနေ ဒီနေ့အသစ်စီးဆင်းလာတဲ့ မှော်ပဲဖြစ်ပါတယ်။ မကွေးတိုင်း မင်းလှနဲ့သရက်လမ်းအပိုင်းထဲက ဒဟတ်ပင်ကနေ အခုဆို ရွာသစ်၊ထကိုင်း(ထန်းကိုင်း) အထိ ရေနံလုပ်ကွက်တွေ ချဲ့ထွင်ပြီး ကိုယ်ပိုင်လုပ်ငန်းတွေအဖြစ် လုပ်ကိုင်ရင်း မှော်ဆိုတဲ့ အိပ်မက်တခုက နယ်ခံများကိုသာမက အမြို့မြို့အနယ်နယ်က လူတွေကိုပါ လွှမ်းမိုးထားနိုင်ခဲ့ပြီ။
လုပ်ကိုင်လိုသူတွေဟာ လယ်ရှင်တွေဆီကနေ လုပ်ကိုင်ခွင့်မြေငှားရမှာ ဖြစ်ပြီး ငှားရမ်းခက ဆယ်ပေပတ်လည်ကို တလ သုံးသိန်းခန့်ကစပါတယ်။ တိုင်သုံးတိုင်ကို ဖိုခနောင့်ဆိုင်ပြီး တာလပတ်တွေ အစီအရီအုပ်ထားတဲ့ လုပ်ငန်းခွင်ဟာ ဟိုတစ ဒီတစကနေ ပြွတ်သိပ်ကျပ်ပြည့်လာခဲ့တယ်။ စက်ပိုင်းဆိုင်ရာ ကျွမ်းကျင်သူနဲ့အတူ လိုအပ်တဲ့ စက်ပစ္စည်းတွေ ဝယ်ပြီးရင် လုပ်ငန်းခွင်ကို စလို့ရပါပြီ။ ငွေထုတ်သူတယောက်နဲ့ ကျန်တဲ့လုပ်ကိုင်သူတွေဟာ ရလာတဲ့ အကျိုးအမြတ်ကို ဝေပုံချ ယူကြမှာပဲဖြစ်တယ်။
တွင်းချင်း ကပ်နေပါလျက် ရေနံမထွက်တာမျိုးရှိသလို၊ ကံထူးသူများကြတော့ လျှံတွင်းဆိုတာမျိုးနဲ့ ကြုံကြိုက်လို့ တနေ့ကို ၁၄-၅ ပီပါ ရတာမျိုးလည်း ရှိပါတယ်။ အဲ့လိုမျိုးဆို မှော်အောင်တဲ့ သူတွေအဖြစ် အားလုံးက သတ်မှတ်ကြတော့တာပါ။ ရေရတဲ့ မြေလွှာကို ကျော်တဲ့အခါ ကျောက်အလွှာထုကို တခါဖောက်ရပြန်တယ်။ မှော်သမားအချင်းအချင်း နောက်လေ့ရှိတဲ့စကားက အိမ်က မိန်းမကိုတောင် တူးထားတဲ့မြေကိုနမ်းသလောက် မနမ်းဖူးဘူးတဲ့။ ကျွမ်းကျင်သူတွေက မြေရဲ့အနံ့ကိုလိုက်ပြီး ဘယ်လောက်ထပ်တူးရမယ်ဆိုတာ၊ ဒီနေရာ ရေနံမထွက်ဘူး စသည်ဖြင့် ခွဲခြားနိုင်တယ်။ ရွှံ့စေးမြေကိုမရုန်းနိုင်လို့ တူးနေလက်စကနေ ကျစ်သွားတဲ့အခါ တရုတ်စက်ကလေးမှာ မီးခိုးတွေ တလူလူထွက်လို့။ တွင်းတိုင်းက အပြိုင်တူးကြတာမို့ စက်သံတွေဟာ ဘဝဂ်ညံစေတယ်။ မီးခိုးတွေက တလူလူနဲ့ ရာသီဥတုပူပြင်းတာမို့ တော်ရုံတန်ရုံလောဘနဲ့တော့ မနေနိုင်ဘူးလို့ တွင်းသွားတူးဖူးတဲ့ သူငယ်ချင်းတယောက်ကတော့ ပြောရှာတယ်။
ရေနံရပြန်တော့ ပွပြီဟေ့လို မမှတ်ပါနဲ့ဦး။ ညဖက်ညဖက် ခပ်ထားတဲ့ပုံတွေကို ခပ်လွယ်လွယ် ဓါးရေးပြပြီး အသာလေးယူသွားတတ်ကြသေးတယ်။ အသက်ဘေးဆိုတော့ ပေးရတာပါပဲ။ ကုန်ခါမှကုန်ရော နှမြောတာတော့ မပြောပါနဲ့တော့။ ဖြစ်နိုင်ရင် ဖက်လုံးပြီး ပြန်လိုချင်တာ အဟုတ်။ ဓါးရေးမပြတဲ့အခါကျတော့ တခြားအရေးတွေ ရှိပြန်သေးဗျ။ တမြန်နှစ်က company ဆိုတဲ့ အမြတ်ကြီးစားတွေ လူမိုက်မွေး ခေါင်းပုံဖြတ်မှုတွေကို မခံမရပ်နိုင်တဲ့အခါ အပြန်အလှန်သတ်ပုတ်ကြရင်း ဓါးထိုးမှု၊ ဝိုင်းဝန်းရိုက်နှက်မှု ဆိုတာလည်း ရှိရဲ့။
တွင်းကနေ ပီပါတွေနဲ့ မင်းလှမြို့ကို ရောင်းပါတယ်။ ဆီကောက်တဲ့သူတွေက တခါ ပီပါကို ကြီးထားပြန်တော့ ကိုယ့်ဖက်က ပါပြန်ရော။ တခါ ဆက်ကြေးဆိုတဲ့ ကောက်သူခံသူတွေက တမှောင့်။ လုပ်ငန်းခွင်ထဲ ကောက်သလို၊ ဆီသယ်တဲ့ လမ်းတလျှောက်လည်း မိုးတွင်းမှာ မှိုတွေပွင့်သလို ပခုံးပေါ်ကအပွင့်တွေကလည်း ဖွေးဖွေးကိုလှုပ်လို့။
ဆီမထွက်ပဲ ရှုံးတာမျိုး ရှိသလားဆိုတော့ ဟုတ်ကဲ့ ရှိပါတယ်။ တလကို အနည်းလေး သိန်းနှစ်ဆယ်ကနေ သုံးဆယ်အတွင်း အသာလေးပဲ။ မှော်အိပ်မက်ကနေ မှော်အောင်သူမှော်ဆရာ မဖြစ်ပဲ၊ လယ်ဆုံး အိမ်ဆုံး နွားဆုံးဆိုတဲ့ မျက်လှည့်ပြလိုက်သလို လောကဓံကို ကျော့ကော့နေအောင် ခံကြရတာလည်း ဒုနဲ့ဒေး။
နွေကျ ဖုန်ထူသလို၊ မိုးတွင်းကျပြန်တော့လည်း နွံထဲမှာ ရုန်းလိုက်ရတာ။ ရွှံ့ကိုဖိနပ်လုပ်မှပဲ ဖြောင့်ဖြောင့်လျှောက်နိုင်တယ်။ တာရာတွေ ရာဘာတွေ စီးလို့ကတော့ တဘိုင်းဘိုင်းလဲလိုက်မယ့်ဖြစ်ခြင်း။ ကားဘီးတွေအကုန်လုံးကို သံကြိုးတုပ်ထားရတာသာ ကြည့်တော့။ မိုးများ ဆက်တိုက်ရွာလို့ ရေမျှောပြီဆို မြေကြီးမှာ တိုင်စိုက်ပြီး ကြိုးတုပ်ထားတဲ့ မီးစက်တွေကအစ အားနဲ့မာန်နဲ့ မျှောသွားကြတာ။ လူတွေတောင် အသက်မသေလို့တော်တော့။
အဲ့လောက်အခက်အခဲတွေနဲ့မို့ မလာချင်ဘူးလားဆိုတော့ မဟုတ်ဘူး။ လာသမှ သိပ်ကိုလာတယ်။ ရှုံးနိမ့်လို့ပြန်သူတွေ ရှိသလို ရေမျောရေနဲ့လိုက်သူတွေလည်း ရှိတယ်။ ဟောတယောက် ဟောတယောက်နဲ့ လာလိုက်တဲ့ အနယ်နယ်အရပ်ရပ်က လူတွေဆိုတာ ပုရွက်ဆိတ်တတွင်းမှာ ပုရွတ်ဆိတ်တွေ အုံနေသလို။
လူတွေများပြီဆိုတော့ တခြားဗာဟီရတွေလည်း များလာပြီပေါ့။ တယ်လီဖုန်းတွေရှိတယ်။ အရက်ဆိုင်တွေ စားသောက်ဆိုင်တွေရှိတယ်။ ကာရာအိုကေကနေ အနှိပ်ခန်းအထိ ရှိတယ်။ သုံးသမျှဖုန်းတွေကလည်း နောက်ဆုံးပေါ် အက်စ်ဖိုးလောက်တော့ တရက်စာ ရှာသလောက်ပဲ။ ဆီသယ်ရောင်းလုပ်တဲ့သူတောင် တလကို သိန်းနှစ်ဆယ်ကျန်တယ်။ ပင်ပန်းတာ၊ ဆုံးရှုံးတာတွေ ထည့်မတွက်ရင်ပေါ့လေ။ လူကတော့ ချံုးချံုးကျယူမယ်။ ကိုယ့်ကားမှာ ဆီများများသယ်နိုင်မှ များများကျန်မယ်။ ဆီများများသယ်နိုင်ဖို့ သွားလိုက်စမ်း ဟိုး.လျှိုထဲ မြောင်ထဲကနေ နေ့နေ့ညည တပုံးရလည်း သယ် တဂါလံရလည်း သယ်ပေါ့။
လူတွေကလည်း များလာ၊ လုပ်ငန်းခွင်တခုလုံးဟာ ငွေဆိုတဲ့ လောဘနဲ့ဆိုတော့ တယောက်နဲ့တယောက်ဟာ မေတ္တာဆိုတဲ့ စကားလုံးတွေ ခမ်းခြောက်လို့။ အရှုံးအမြတ်ကို ပေသီးနဲ့တွက်နေကြရတာမို့ ရှဥ့်လည်း ရှဥ့်အထွာ ဆိတ်လည်း ဆိတ်အထွာပေါ့။ ထစ်ခနဲဆို ဓါးနဲ့ရှင်းမယ်၊ အင်အားကြီးသူ အုပ်စုတောင့်သူတွေက မင်းမဲ့စရိုက်ဆန်စွာ ထုနှက်ရိုက်တာတွေလည်း ခဏခဏ။ ဘယ်သူက ဘယ်သူ့ကိုမှ မပြောရဲ။ ပြောနိုင်ဆိုနိုင်ဆိုလို့ အဲ့ဒီယာခင်းအရှင်တွေက ပြောမှ ဆိုမှ ပြီးကြရတဲ့ အရပ်တောင်ဖြစ်နေပြီ။ လူ့လောက စည်းဘောင်တွေ တရားဥပဒေဆိုတာ ဒီအရပ်မှာ မရှိလေ။
ဒါပေမယ့် ဒီအရပ်ကို မသွားချင်တဲ့သူ ဆိုတာမရှိ။ အခုထိတော့ မှော်အိပ်မက်တွေ မက်နေဆဲ…ဘယ်သူကမှ ဒီမှော်…မှော်ရုံတောမှာဖြင့် မမော..မေမာႏိုင္ၾကေသး..
Posted by ywartharlay-ytu at 11:49 PM0comments Links to this post